Ahoana ny fomba hanaovan'ny alika ny anarany | Tontolo alika
Mila manome anarana ny zava-drehetra ny olombelona mba hifankahalala bebe kokoa. Rehefa miara-miaina amin'ny biby fiompy isika, na alika izany na saka (na hafa), dia nametraka anarana hahafantatra azy koa izahay, ary hanampy antsika hifandray tsara amin'izy ireo izany.
Raha sambany ianao miaina miaraka amin'ny volony ary te hahalala ianao ny fomba fanaovana alika hianatra ny anarany, aza esorina amin'ny masonao ny masonao. Ho hitanao fa mora ny mahazo azy 😉.
Ny zavatra voalohany dia mazava ho azy, mba hisafidianana anarana ho an'ny alika. Mba hanaovana izany dia azonao atao ny mijery ny lokon'ny volony, na ny toetrany. Na izany na tsy izany, anolorana azy ho fohy, amin'ny vaninteny iray na roa, satria tsy ho lafo aminao ny mampifandray azy aminy; etsy ankilany, raha manana vaninteny telo na maromaro izy dia mila fotoana bebe kokoa hianarana azy.
Raha vantany vao nanapa-kevitra ianao hoe inona no hiantsoanao azy, fotoana izao hampahafantaranao anao fa manomboka izao dia hatao hoe izany. Fa mazava ho azy, dingana iray izay haharitra andro vitsivitsy amintsikaEny, araka ny fantatsika, tsy afaka miresaka izy ireo (farafaharatsiny, tsy toa antsika).
Ka mba hampianarana azy ny anarany dia mila averimberinao imbetsaka mandritra ny andro vitsivitsy izany. Ohatra, isaky ny nanao zavatra tsara ianao dia hiteny hoe "Toby, tsara." Ny anarana dia tokony holazaina foana teo alohaRaha tsy izany dia hiafara amin'ny fanaovana korontana ho azy isika ary tsy ho fantany izany. Ary ankoatr'izay, mila manome valisoa ianao, na amin'ny fikarakarana alika, fotoam-pialan-tsasatra, fifamihinana, ... izay tianao rehetra; amin'ity fomba ity, ny alika dia hampifandray azy amin'ny zavatra tsara, ka amin'ny ho avy tsy ho ela, rehefa antsointsika izy dia ho avy eo amintsika, satria ho fantany fa hahazo zavatra izay ho tiany izy. Ary azo antoka fa tsy te halahelo azy ianao.
Herim-po sy faharetana, fa ny tsy fivadihana amin'ny farany dia ho fantatrao ny anarany. Azo antoka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Ahoana ny fomba hanaovan'ny alika ny anarany
Ahoana no hilazana raha manana alika fisarahana ny alikako